Fampianarana Lahatsary Natolotry ny Tantsaha Ho An’ny Tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2018 12:33 GMT
Fanamarihana: ity halatsoratra ity dia navoaka tamin'ny janoary 2014
Indraindray, mila mandeha lavitra be mitety vohitra maro mandritra ny andro iray ireo tantsaha mpiasa mpanentana eny anatin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra ao India. Ho azo atao ve ny manamora ireny asa ireny amin'ny alàlan'ny teknolojia, mba hitrandrahana ireo fotodrafitrasam-pikambanana efa misy?
Ilay niantomboka ho toy ny tetikasa fikarohana nataon'ny tarika Technology for Emerging Markets ao amin'ny Microsoft Research India tamin'ny 2006 no niofo ho fikambanana tsy miankina sy tsy mitady tombony ara-bola, taona roa monja taorian'izay. Digital Green ho fampifandrohizana ny teknolojia amin'ireo mpisehatra eny an-kianja (fantatra koa amin'ny hoe mpiasa mpanentana) afaka ataon'izy ireo ny manova ny fiainan'ireo mahantra manerana ny tany. Amin'ny fomba ahoana? Miaraka amin'ireo lahatsary notontosain'ireo mpikambana ary natao ho azy ireo izay mpikambana rahateo ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina, ka alefa ho jerena eo an-toerana miaraka aminà mpandrindra iray. Miasa miaraka aminà mpifanolo-tànana ny Digital Green mba “hampita fomba fanao tsara ho an'ny vondrom-piarahamonina, amin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo lahatsary novokarina teo an-toerana ihany sy apariaka miaraka amin'ny mpandrindra.” Ity ny iray tamin'ireo lahatsarin-dry zareo:
Hatramin'ny 2010, efa nahatety vohitra 3.100 sy nahazo mpijery 234.360 ny Digital Green. Tamin'ny Aogositra 2012, nanamafy ny ezaka nataony izy ireo, tamin'ny fanantenana fa hahazo hahatety vohitra 10.000 sy tantsaha iray tapitrisa ao India ao anatin'ny taona telo manaraka. Lahatsary 2.600 amin'ny fiteny 20 samihafa no efa novokarin-dry zareo.
Lakshmi Iyer no Tale Lefitra misahana ny Tetikady sy Fanavaozana eo anivon'ny Digital Green. Tamin'ny tafa nifanaovana tao amin'ny Skype, nofaritan'i Iyer ho toy ny “fikambanam-panabezana” ny Digital Green, midika fa na ilay fikambanana aza dia mbola mianatra sy miezaka mampifanaraka ny filàny arakaraky ny angondrakitra dinihan-dry zareo. Lazainy fa ao anatin'ny vondrom-piarahamonina no mitoetra ny heriny. Ilay fandaharanasa dia..
…80% momba ny vondrom-piarahamonina ary 20% momba ny teknolojia. Tena mifototra betsaka kokoa amin'ny fampidirana ny teknolojia ho fanamafisana ny fahombiazan'ireo izay efa misy sy tafapetraka eo an-toerana.
Iyer mamaritra ny teknolojia ho toy ny sosona iray fanampiny ho an'ireo vondrom-piarahamonina, ireo mpandridra sy ireo tarika mpamokatra lahatsary no antoka mampahomby ny Digital Green eny an-kianja. Ny fanofanana hamokatra lahatsary ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina dia misy idiran'ny fanoratana tantara, asa fikirakiràna fakantsary, ary fikiràna, miaraka aminà olona telo na efatra isaky ny distrika – amin'ny ankapobeny dia ireo efa mahay mamaky teny sy manoratra.
Resahan'ilay mpanorina azy Rikin Gandhi ao anatin'ny the Hindu ny amin'ireo mpandray anjara,
Arakaraky ny ianaran-dry zareo ny famokarana lahatsary no mampitombo koa ny fahatokisantena bebe kokoa ananan-dry zareo. Toy ny matianina no fijerin'ny vondrom-piarahamonina niaviany azy ireo.
Raha toa ireo fikambanana hafa toy ny Farm Radio International sy ny AgroInsight ka mety manao zavatra mitovitovy amin'izany, dia lazain'i Iyer fa tsy heveriny akory ny hisian'ny fikambanana hafa hirotsaka amin'ny fampiasàna be ny lahatsary tahaka izao – firotsahana iray nateraky ny fandalinana lalina navoaka tao anatin'ny gazety fampahafantaran'ny Teknolojia ho an'ny Fampandrosoana Iraisampirenena (Technologies for International Development.)
Mametraka fifantohana manokana amin'ny fanaovana fanarahamaso akaiky sy ny fandalinana ny Digital Green, amin'ny fanangonana angondrakitra momba ny fomba fizaràna ireo lahatsary sy ny fampifanarahana izany amin'ny zavamisy – ary avy eo mampifanitsy izany amin'ny filàna. Raha misy fanontaniana mafy fototra sy miverimberina, mety hisy ny lahatsary vaovao vokarina na asiam-panavaozana mba hiantohana fa ho tafita tsara ny hafatra.
Ity ny ohatra iray amin'ny fandinihana lalina nataon-dry zareo. Ao anatin'ity ohatra ity, vehivavy ny 81 % tamin'ny mpijery tamin'ny taona lasa tao India, ary lehilahy ny 19%, amin'ny ampahany dia noho ilay tetikasa niasa ho fanosehana ireo vondrom-behivavy efa nisy teny anaty vondrom-piarahamonina.
Raha toa ny tanjona tany am-boalohany ka ny asa fambolena, ankehitriny ilay fikambanana dia manitatra ny asany ho any amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny fahasalamàna. Hoy i Iyer :
Tsapanay fa mba hampivoarana ny faripiainana sy ny fiainan'ireo tsirairay iarahanay miasa, tena ilaina ny mampiditra ny resaka fanjariantsakafo sy ny fahasalamàna ho fanampin'ireo lohahevitra miresaka fambolena.
Nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny DFID India ny Digital Green mba hisedràna ny fahombiazan'ilay fomba fanao any anatin'ireo faritra jeografika vaovao (Etiopia sy Ghana) ary hampivelatra ilay fomba fanao ho amin'ny sehatra hafa amin'ny fahasalamàna sy ny fanjarian-tsakafo. Amin'ny fifantohana amin'izay hanamafisana ny fahafahamanaon'ireo mpiasan'ny fahasalamàna avy amin'ny fanjakàna, ny hevitra dia ny “hampiasa ny tanjak'ireo mpanome tolotra efa eo an-toerana”. Amin'izao fotoana izao, ny fandaharanasa momba ny fahasalamàna dia mifantoka amin'ny fahasalamàn'ny reny sy ny zaza.
Tamin'ny Novambra, ny Digital Green dia tafiditra ho isan’ny 2013 Nominet Trust 100 ho toy ny ohatra iray amin'ireo fikambanana “mampiasa ny teknolojia hanafainganana ny fiovàna sosialy.” Hoy i Iyer milaza fa iray amin'ireo tena tanjak'izy ireo ny fandalinana ireo angondrakitra sy ny fampifanarahana izany amin'ny zavamisy “Nijanona ho misokatra hatrany izahay ary ho fikambanana ara-panabeazana. Tsy vahaolana tokana velively, na ho inona na ho inona.”
Miaraka amin'ny tohana nataon'ny Fondation Bill sy Melinda Gates ary ny fanjakàna Indiàna, hatramin'ireo mpifanolo-tànana ao an-toerana, vonona ny hisondrotra hatrany ny Digital Green, ary tsy hanadino hifantoka amin'ny fototra niaingàny.